Abasebenzi beBrand Brands kunye neBhajethi yeNtlalo | Martech Zone
Umlilo wasendle kunye nobudala beNtengiso kutshanje benziwe survey ukubuza ngaphezulu kwama-500 urhwebo lweshishini abaphathi kunye nabaphathi malunga nendlela yabo kwintengiso yentlalo. Bafundile ukuba zeziphi ezona mpawu zintle kunye nezona ziphumelelayo ezenzayo ukubandakanya abaphulaphuli, kunye nezinto ezenziwa ngabo balwa noluntu.
Imithombo yeendaba kwezentlalo akusekho khetho kwishishini, kubalulekile ukugcina nokukhusela ukuthembeka kwegama lakho kwi-intanethi. Ukusuka kwinkonzo yabathengi ukuya kwintengiso, unokufumana yonke imboni kwi-Intanethi - uphando malunga nokuthenga kwabo okulandelayo kunye nokusasaza igama ekugqibeleni kwabo. Umlilo wasendle yalatha la manqaku:
I-45% yeenkampani ezinengeniso engaphezulu kwe- $ 1 yezigidigidi zinabasebenzi abangaphezu kwama-50 abazinikezele kwimidiya yoluntu.
Ukuthengisa, i-PR, kunye namava abaThengi ngamaqela aphambili anegalelo kwezentlalo, ukanti iimpembelelo zentlalo ukuya kuthi ga kumaqela alishumi kwishishini.
I-68% yeenkampani zilindele ukunyusa inkcitho yezentlalo kumjikelo olandelayo wohlahlo-lwabiwo mali, ebonisa ukuba indima yentlalo kumxube wentengiso yamkelwe kwaye ibekwa phambili.
tags: 2013ntethoibhajethiShishiniGoogle +njani uhlahlo lwabiwo-maliImidiya yokuncokolauhlahlo-lwabiwo mali lweendaba zentlaloabasebenziimeko yentlalousetyenziso lomlilo wasendleUsetyenziso lomlilo wasendle